ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် စေတမန်: မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသို့ (အပိုင်း ၇)
ပြောစရာ အကြောင်းလေးရှိလို့ ပြောရအုံးမယ်.. ဗုဒ္ဓဘာသာက ခရစ်ယာန်၊ မွတ်စလင်ဘာသာကို အကြင်နာကင်းမဲ့သော ဘာသာ သနားညာတာမရှိ ဒိဌိတွေ လို့ ဆိုလားလို့ ပြောရအုံးမယ်ဗျာ။ သူတို့ ပြောချင်တာက တိရစ္ဆာန်များကို သတ်ပြီး စားသောက်ကြလို့ အပြစ်၇ှိတယ်ဗျာ... ခရစ်ယာန်ကော မွတ်စလင်ကော တူညီစွာ လက်ခံထားတာက ဘုရားသခင်သည် သူ့၏ပုံသဏ္ဍန်တော်နဲ့ အညီ လူကို ဖန်ဆင်း၍ ဇီဝ အသက်ကို မှုတ်သွင်းပြီး လူကို ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့ပါတယ်.. ဤတိရစ္ဆာန်များကို လူ၏လက်၌အပ်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်... လူမိန်းမသည် လူယောင်္ကျားအားဖြင့် ဖြစ်လာသလို့ အရာခပ်သိမ်းတို့သည်လည်း လူအားဖြင့် ဖြစ်လာသည့်ဟု ဆိုမိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ ငနာဂတုံးတွေ က သူများဘာသာကို ပြောပြီး သူတို့ကြတော့ ကိုယ်တိုင်မသတ်ပါဘူး သူများသတ်ပြီး ချက်ပြီး အခန့်သားလေး နဲ့ ဝင်ဆွဲတော့တာပဲ. . မိတ်ဆွေတို့ စဉ်းစားကြည့်ပါ... ဒီအသားကို တလုတ်စားတိုင်း တကျိကျိကိုက်ဖဲ့ နေတာ သူကကော အပြစ်လွှတ်နိုင်မည်လော??? ဥပဒေမှာတောင် ရှိသေးတယ်... လူ့အသက်ကို သတ်တာနဲ့ လူ့အသားကို စားတဲ့ သူ ဘယ်သူအပြစ်ပိုကြီးလဲ????လူ့အသက်ကို သတ်တဲ့လူက နိူင်ငံဆိုင်ရာ ဥပဒေပေါ်မူတည်ပြီး ထောင်နှစ်အရေတွက်လောက်ပဲ ထောင်ကျမှာ လူ့အသားကို စားတဲ့သူက တသက်တကျွန်း သေဒဏ်ပဲ .. သူခိုးက ပစ္စည်းခိုးပြီး အပေါင်လက်ခံမီ ပစ္စည်းလက်ခံမီရင်တောင် လက်ခံမှီတဲ့သူတောင် အနည်းအများ ထောင်ကျတော့တာပဲ.. အသက်ကို သတ်လို့ အပြစ်ရှိကြကြေးဆို ခင်ဗျားတို့ ရောဂါဖြစ်တဲ့အခါ ဆေးမသောက်ပါနဲ့ ခင်ဗျားတို့သောက်လိုက်တဲ့ ဆေးဟာ ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ခန္ဓာမှာ ၇ှိတဲ့ ရောဂါပိုးသန်းပေါင်းများစွာ သေကြေပျက်စီးစေပါတယ်... (ဤနေရာမှာ စာရေးသူ ပြောချင်တာက လူအသက်သတ်ဖို့ မဆိုလိုပါ ဘာသာရေး အစွန်းရောက် လူသတ်နေကြသော သူများကိုလည်း စာရေးသူကိုယ်တိုင် မလက်ခံပါ.) အဘယ်သူသည် အသက်ကို သတ်၍ကင်းလွတ်သောသူ ၇ှိမလဲ????? ပြောပြပါ ကျွန်တော်တွေ့ဖူးချင်လိုပါ......
Posted by messenger at 6:36 AM